War hada: Maxaad kala Socotaa Socdaalka Wasiir Odowaa uu Ku Tagay Magaalada Cadaado Xili ay jiraan…..+Sawirro | Kismaayo24 News Agency
War hada: Maxaad kala Socotaa Socdaalka Wasiir Odowaa uu Ku Tagay Magaalada Cadaado Xili ay jiraan…..+Sawirro
Thursday September 22, 2016 - 3:54 under Somali News by Tifaftiraha K24
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goordhow gaaray Magaalada cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee Galmudug.
Wafdigan oo sidoo kale qayb ka ahaayeen wasiiru dawlaha madaxtooyada Soomaaliya, Mahad Salaad iyo mas’uuliyiin kale ayaa Garoonka Diyaaradaha ee Caddado ku soo dhoweeyay Madax ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug, maamulka degmada iyo qaybaha kale duwan ee bulshada.
Wasiir dawlaha madaxtooyada JFS mudane Mahad Maxamed Salaad ayaa ugu horayn ka mahadceliyay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado, isagoo sheegay in safarkoodu la xiriiro sidii loo dardargalin lahaa arrimaha doorashada deegaankan ka dhacaya.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo Federaalka JFS mudane C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa, ayaa isna sheegay in doorashada sanadkan dalka ka dhacaysa ay tahay mid fursad wayn siinaysa shacabka, sidaa darteedna loo baahanyahay in ahmiyadeeda lagu baraarugsanaado.
Waxa uu intaa ku daray wasiir Odawaa, in maalmaha soo socda wafdigu joogi doono magaalada Cadaado, islamarkaana ay kulamo la qaadan doonaan Odayaasha dhaqanka si loo dardargaliyo arrimaha doorashooyinka oo dawlada Soomaaliya ay xoogga saarayso inay si hufan u dhacdo.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Cadaado gaarayay wafuud kala duwan, waxaana si weyn looga dareemayaa ololaha doorashooyinka dadban ee sanadkan dalka ka dhacaya Dalka.